Nhau - HDPE simbi bhandi yakasimbisa zononoka corrugated pombi musika kunyorera
HDPE simbi bhandi rakasimbisa zononoka chemarata mutopota musika kunyorera
Mumakore achangopfuura, nenyika chengetedzo yesimba uye marongero ekudonhedza uye kutarisisa kwepasirese kune yakaderera kabhoni hupfumi, pamwe nekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, vanhu vakanyanyisa kutarisisa hupenyu hwepamusha. Semhando nyowani yetiweji pombi, PE tsvina tsvina uye HDPE simbi bhandi yakasimbisa inonamira corrugated pombi dzakambotambirwa nemakambani makuru esuweji senge mapepa ekugaya.
Pe tsvina tsvina, HDPE simbi bhandi rakasimbiswa zononoka chemarata mutopota, yakanakisa kuyerera mashandiro, yakafara kuyerera nzvimbo uye zvimwe zvakasarudzika polymer hunhu, kuitira kuti PE pombi ine yakanakisa kugadzirisa kuita. Xinqihang Plastic Indasitiri ine nzira dzakawanda dzekuumba dhizaini pombi, senge jekiseni kuumbwa, furidza kuumbwa, vharuvhu thermoforming, bemhapemha, rotational Kuumbwa, electroplating achipupuma furo, simbi pamusoro spraying, nezvimwewo. zvigadzirwa zvakavakirirwa uye izvo zvinoda kuomarara. Yakakwira-velocity zvinhu zvinoshandiswa kuburitsa dzakaonda-dzakakomberedzwa zvikamu uye zvigadzirwa zvinoda kukurumidza kugadzirisa.
Kuti usangane nezvinodiwa zvepamusoro zvehurongwa hweseji yetsvina, kusanganisira kumanikidza, kuchengetedzeka, uye runyararo, hombe-dhayamita PE tsvina mapaipi akaonekwa. Mapaipi ePE akatsiva mapaipi esimbi epakutanga uye mapaipi ekongiri. Sezvo rusvingo rwemukati rweiyo hombe-dhayamita PE yetiweji pombi iri mushe, zvakare yakakosha panguva yekumisikidza, uye haizogadzi yakadzikira yakakura kuwedzera yemukati mambure kukwirira. Uye zvakare, mutengo wehukuru-dhayamita PE tsvina pombi haina kunyanya kukwirira, nekudaro ichideredza mutengo wepurojekiti yese.
Iyo yekunze nekunze kwe PE tsvina pombi inogadzirwa ne "green" isiri-chepfu PE zvinhu, izvo zvisingazokanganisa nharaunda yakatenderedza. Iyo Pe tsvina tsvina zvinobudirira inoderedza ruzha rweiyo drainage uye inogadzira yakasununguka yekugadzira nharaunda. Kuyerera kurwisa kudiki kudzivirira kusvibisa uye kuona inoshanda uye inotsvedzerera abudise. Iyo polyethylene PE zvinhu ine yakatsetseka yemukati madziro uye inogona kushandiswa kuburitsa PH2-PH12 zvinwiwa. Kuiswa chisimbiso kwakanaka kwazvo, uye hapana mukana wekudonha.
Post nguva: Mar-10-2021